च्याउ खानुहुन्छ ? जान्नुहोस् यसका फाइदा - Makalukhabar.com
च्याउ खानुहुन्छ ? जान्नुहोस् यसका फाइदा
मकालु खबर	 सोमबार, मङ्सिर २२, २०७७ १८:४९ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । च्याउ शाकाहारी तरकारी हो । यो स्वादिष्ट हुन्छ । च्याउ स्वास्थ्यका लागि पनि एकदमै फाइदाजनक छ । यसमा क्यालोरीको मात्रा कम हुनुका साथै थुप्रै पोषक तत्त्वहरू पनि पाइन्छन् । जसले शरीरलाई बढी भन्दा बढी लाभ पुर्‍याउँछ । यसलाई करी, सलाद, सूप र तरकारीहरू खाजा जस्तो बनाएर पनि खान सकिन्छ ।
अब थाहा पाउनुस् च्याउले कसरी शरीरलाई फाइदा पुर्‍याउँछ त ?
मोटोपन घटाउन :- च्याउमा भरपुर प्रोटिन हुन्छ । मोटोपन हटाउन चाहने व्यक्तिहरूले प्रोटिनयुक्त आहार खानुपर्छ । तौल घटाउनका लागि च्याउ पनि राम्रो विकल्पको रूपमा लिइएको छ ।
रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउन : च्याउ एक प्राकृतिक एन्टीबायोटिक तत्व हो । यसले माइक्रोबियल र फंगल सङ्क्रमणलाई हटाउँछ । यसमा भएको एन्टीअक्सिडेन्टले शरीरलाई हानि गर्ने फ्री र्‍याडिकलबाट बचाउँछ । शरीरका कोशिकाहरूको पनि मर्मत गर्नमा सहयोगी हुन्छ ।
पोषण विशेषज्ञका अनुसार च्याउलाई रै प्रकारका चीजहरू समावेश गरेर खान सकिन्छ । यसलाई तपाईँको दैनिक खानामा सलाद, तरकारी वा सूपमा समावेश गर्न पनि सकिन्छ ।
‘दल विभाजनको दोष कसले लिने भन्नेबारे अलमल !’